Xulka Qaranka Soomaaliya oo maanta la ciyaari doono xulka Eswatinia – XAMAR POST
By Mohamed Abdi Last updated Mar 23, 2022
Xulka Qaranka Soomaaliya ayaa maanta oo Arbaco ah lagu wadaa in kulan ciyaareed ay la yeeshaan dhigooda Xulka Qaranka Eswatini, kaas oo ka tirsan is reeb reebka wajiga hore ee koobka wadamada Qaarada Africa ee loo yaqaano AFCON kaas oo 2023 lagu qaban doono dalka IVORY COAST, iyadoo Ciyaartaan ay tahay mid xiisa badan oo uu dalkeena Soomaaliya sanadkaan nasiib u yeeshay inuu ciyaaro is reeb reebka koobka wadamada qaarada Africa.
Sidoo kale, Soomaaliya iyo Eswatini ayaa wada ciyaari doono labo kulan, waxaana lugta hore ee Ciyaarta ay maanta ka dhaceysaa dalka Tanzania gaar ahaan Magaalada Daaru Salaam, iyadoo ay haatan Halkaas kuwada suganyihiin labada xul.
Xidigaha xulka Qaranka Soomaaliya ayaa dhowrkii todobaad ee lasoo dhaafay waxay wadeen tobabaro ay iskugu diyaariyeen ciyaarta maanta.
Hadii Xulka Qaranka Soomaaliya ay badiso labada kulan oo ay ku wajaheysoi dalka Eswatini , waxey Soomaaliya si rasmi ah ugu qeyb gali doontaa is reebka ugu dambeeya ee looga qeyb galiyo tartanka AFCON.
Sidoo kale, kulan ciyaareedka Xulalka Soomaaliya iyo Eswatini waxaa uu dhexmari doona xiliga Soomaaliya tobanka saac oo galabnimo ( 4:00PM) ,iyadoo uu socdo abaabul xoogan oo taageernimo loogu muujinayo Xulka Qaranka Soomaaliya oo ay wadaan madax ka tirsan xiriirka kubadda cagta Soomaaliya iyo safaarada Soomaaliya ee dalka Tanzania.
Goodax Bare iyo musharixin kale oo ku haray doorashada wareega 1-aad ee Beledweyne